Guddiga Maaliyadda Barlamaanka DFS & Golaha shacabka Rwanda oo kulan yeeshay – Radio Daljir
Guddiga Maaliyadda Barlamaanka DFS & Golaha shacabka Rwanda oo kulan yeeshay
Luulyo 16, 2019 3:37 b 0
Magalada Kigali ee dalka Rwanda ee Caasimadda dalka Rwanda waxaa kulan ku yeeshay Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka Barlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Rwanda.
Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ayaa warbixin la xiriirta xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda sanadkii 1994-tii waxaa ay ka dhageysteen dhigooda dalkaas qaabka loo xaliyay iyo sida ay uga soo kabteen hadda.
Xildhibaan Mahd Maxamed Salaad oo ka mid ah xubnaha Guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ee kulanka ka qeyb galay ayaa sheegay in sidoo kale ay warbixin ka siiyeen qaabka shaqo ee Goleyaashooda Sharci Dejinta oo labo Aqal ka koobaan sida Soomaaliya oo kale.
Geba-gabadii kulanka ayaa waxaa leys kula soo qaaday sidii xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqaynta Goleyaasha Barlamaanka labada dowladood, iyo sidoo kale in Soomaaliya ka gacan siiyaan khibradooda la xariirta dhismaha hay’ado dowladeed ee dal kasoo kabanaya burbur iyo dagaalo sokeeye.
Dowladda kenya oo sheegtay inay dileen saraakil ka tirsan Alshabaab